သင်္ချာတော်လွန်းလို့ လူကြည့်များနေတဲ့ မြန်မာ(KGတန်း) ကလေးငယ်လေး - 9style
Home/ရုပ်သံ/သင်္ချာတော်လွန်းလို့ လူကြည့်များနေတဲ့ မြန်မာ(KGတန်း) ကလေးငယ်လေး
သင်္ချာတော်လွန်းလို့ လူကြည့်များနေတဲ့ မြန်မာ(KGတန်း) ကလေးငယ်လေး
ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ရုပ်သံလေးကတော့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သင်္ချာတော်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်သံဖိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….အဆိုပါကလေးငယ်ဟာ KG တန်းကလေးဖြစ်ပြီး ဘေးကလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မေးမြန်းမှုတွေကို လက်တန်းဖြေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်….
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ခုလို ထူးချွန်တဲ့ကလေးငယ်တွေ ပေါက်ထွက်လာတာ ဝမ်းသာစရာပါ…ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး စကားမပီကလာ ပီကလာနဲ့ ဖြေနေတဲ့ကလေးရဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး…ကလေးငယ်ကို အားပေးချစ်ခင်သူ အများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်….
ကလေးတစ်ယောက်ထူးချွန်ထက်မြတ်ဖို့ဆိုတာ မိဘတွေရဲ့ သွန်သင်မှု… ဂရုစိုက်အချိန်ပေးမှုတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်…..ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမှာလည်း ခုလိုကလေးငယ်ရှိတယ်ဆိုရင်… အချိန်ပေးပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝ တည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်……
သင်ျခြာတျောလှနျးလို့ လူကွညျ့မြားနတေဲ့ မွနျမာ(KGတနျး) ကလေးငယျလေး
ယခုတဈခါတငျဆကျပေးမယျ့ ရုပျသံလေးကတော့ အသကျငယျငယျနဲ့ သင်ျခြာတျောတဲ့ ကလေးတဈယောကျရဲ့ရုပျသံဖိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ….အဆိုပါကလေးငယျဟာ KG တနျးကလေးဖွဈပွီး ဘေးကလူကွီးတဈယောကျရဲ့ မေးမွနျးမှုတှကေို လကျတနျးဖွနေိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ….
ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံမှာ ခုလို ထူးခြှနျတဲ့ကလေးငယျတှေ ပေါကျထှကျလာတာ ဝမျးသာစရာပါ…ခဈြဖို့ကောငျးပွီး စကားမပီကလာ ပီကလာနဲ့ ဖွနေတေဲ့ကလေးရဲ့ ရုပျသံဖိုငျဟာလူမှုကှနျရကျမှာ ပြံ့နှံ့လကျြရှိပွီး…ကလေးငယျကို အားပေးခဈြခငျသူ အမြားအပွားရှိနခေဲ့ပါတယျ….
ကလေးတဈယောကျထူးခြှနျထကျမွတျဖို့ဆိုတာ မိဘတှရေဲ့ သှနျသငျမှု… ဂရုစိုကျအခြိနျပေးမှုတှနေဲ့လညျးသကျဆိုငျပါတယျ…..ခဈြတဲ့ပရိသတျကွီးမှာလညျး ခုလိုကလေးငယျရှိတယျဆိုရငျ… အခြိနျပေးပွီးပြျောရှငျတဲ့မိသားစုဘဝ တညျဆောကျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျနျော……Credit-Searchmyanmar
သိနျး ၂၀ ကို လကျဖကျရညျတဈခှကျနဲ့လဲခဲ့တဲ့ လေးစားဖှယျအမြိုးသား
အခုတလော လူပြောများနေကြလို့ မြန်မာတို့ နှင့် အတိတ်၊ နမိတ်၊ တဘောင်များအကြောင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အဆင့်တန်းမရှိသူများ၏ လက္ခဏာ ( ၁၈ ) ရပ်
ပင်လယ်ကြီးကို သူမရဲ့ခံစားချက်တွေ အော်ဟစ်ရင်ဖွင့်နေတဲ့ သင်းသင်း
ရှားမှ ရှားတဲ့ YBS ယာဉျမောငျးတဦး (ဒီလိုလူတှေ အမြားအပွား ပျေါထှကျလာဖို့ လိုပါတယျ)